mercredi, 09 janvier 2019 20:22
Marc Ravalomanana: Miarahaba ny Filoha vaovao Andry Rajoelina
Misaotra ireo rehetra nanome tanana azy.
Miantso ny rehetra ho tony ary ampangina ny fifanenjehana sy fifanaratsiana, hirosoana amin'ny tena fampandrosoana ny Firenena.
Mitaky ny amoahana ireo voafonja tsy ara-drariny.
mercredi, 09 janvier 2019 18:29
Sambava: Ankizy avy nihinana bokom-bolo iray maty, iray hafa marary mbola tsaboina
Tranga nanaitra ny mponina ao amin’ny Fokontany Maevatanana, Kaominina Bemanevika ny nahafatesana zaza izay manodidina eo amin’ny 7 taona ny marainan’ny alatsinainy 07 janoary 2019, ary natao veloma farany androany maraina. Misy zaza iray hafa mbola manaraka fitsaboana amin’ny fomba Malagasy fa tsy nanaiky ho entina amin'ny tobim-pahasalamana ny fianakaviany.
Tsy fantatra na fifandrian-javatra na mety misy fanapoizinana niaraka fa ‘’sarotra aminay ny miditra amin’io tranga io » hoy ny tompon’andraikitry ny fahasalamam-bahoaka eto amin’ny Distrikan’i Sambava satria « tsy mba nandeha tany amin’ny hopitaly ireo fa nitsabo tany ho any ihany » koa araka izany dia mety hijanona ho baraingo mandrakariva ny antony nitarika izao fahafatesana izao.
Fa ny fantatry ny fianakaviana dia nisy ankizy maromaro samy tao Maevatanana io nanenjika bokom-bolo kely (kazarana ragidro) dia niara-nanenjika azy dia rehefa azo dia ireto roa ireto nitondra azy nody dia nihinana azy.
Nalevina androany ilay zaza nodimandry.
mercredi, 09 janvier 2019 18:18
Morafeno-Toamasina: Faly loatra tamin’ny fahalanian-dRajoelina, rangahy iray tapaka lalan-drà
Tranga mampalahelo no nisy tao Morafeno ny harivan’ny omaly talata 8 janoary. Rangahy iray fantatry ny maro amin’ny solon’anarana hoe : Toussain no tapaka lalan-drà tampoka teo am-pijerena valim-pifidianana ofisialy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.
40 taona eo ho eo i Toussain, monina ao Morarano ary mpitondra kalesa no anton’asany.
Niara-nijery fahitalahvitra tamina olona maromaro tao amin’ny toeram-pivarotana iray tao Morafeno Toamasina izy ny harivan’io talata 8 janoary io. Teo am-panononana ny isam-bato sy salanisam-bato ary ny anaran’ny kandida mpandresy, dia niteny i Toussain hoe : « Voafidy prezida Rajoelina, mba ahita asa amin’izay zaho ». Taorian’io dia nianjera tampoka tamin’ny seza nisy azy izy.
Ankafotra-Sandrandahy: Main’ny varatra ny EPP
Potika tsy nisy noraisina ny tafon-tsekoly, misy efitra telo, ny latabatra sy seza ary ny boky aman-kahie tao amin’ity EPP Ankafotra, Kaominina Sandrandahy, Distrikan’i Fandriana ny harivan’ny zoma 4 janoary 2019 teo, nilatsahan’ny varatra. Nanoram-baratra tamin’io.
Mpianatra miisa 95 no tsy manana foto-drafitrasa hianarana satria dia potika hatramin’ny rindrin-trano noho io loza io.
Misy ihany ny efa nanome fanomezana saingy tsy ampy hisahanana ny fanarenana ilay foto-drafitrasa simba.
Efitrano roa amina tranon’olontsotra no ampiasaina vonjimaika ianaran’ny mpianatra.
mercredi, 09 janvier 2019 17:30
Morondava: Hosoloina PDS izay Ben’ny Tanàna tsy niara-dia tamin’i Andry Rajoelina ?
Hagagana ny an’ny mpihaino ny Radio Fréquence Menabe (RFM) omaly nandre ireo mpanentana fandaharana sy ireo mpanohana an’i Andry Rajoelina nilaza tamim-pahasahiana fa hosoloina PDS izay Ben’ny Tanàna tsy niara-dia tamin’izy ireo.
Olona fidiam-bahoaka mivantana ny Ben'ny Tanàna ka tsy fanosihosena ny demokrasia ve ny fanesorana azy mialoha ny fahataperan'ny fe-potoam-piasana noho ny safidy politikany, hoy ny fanamarihan'ny olona nandre io filazana io tao amin'ity radion'ny depiote MAPAR Hawel Mamod'Ali voafidy eto Morondava ity.
mercredi, 09 janvier 2019 17:06
Etazonia: Manohana tanteraka ny HCC
« Etazonia dia manohana tanteraka ny HCC sy ny andraikitra nankinin'ny Lalampanorenana taminy, raha namoaka ny vokatra ofisialin'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy izy ireo tamin’ity andro manan-danja ity. Miarahaba ny Filoha voafidy Andry Rajoelina sy ny vahoaka Malagasy izahay noho ny fahavitan'iny fifidianana demokratika iray iny » araka ny fanambaran'ny Mpiandraiki-draharahan'ny Masoivohon'i Etazonia Stuart Wilson momba ny vokatra ofisialin'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy.
« Miantso ny tsirairay izahay hanaja ny filaminana ary hisoroka ny herisetra, hanaja ny Lalampanorenana, sy ny fanapahan-kevitry ny HCC, ary indrindra ny safidin'ny maro an'isa. Etazonia dia manantitra hatrany ny fanohanany ny demokrasia eto Madasigasikara ary ny fahavononany hijoro hatrany eo anilan'ny vahoaka Malagasy ».
mercredi, 09 janvier 2019 17:05
Harry Laurent Rahajason: Atao fanadihadiana eny amin’ny Toby Ratsimandrava
Isan’ireo olona notorian’ny Primatiora teny amin’ny Fampanoavana ity minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana teo aloha ity, ary namoahan’ny ministeran’ny Atitany fandraràna tsy mahazo mivoaka an’i Madagasikara.
mercredi, 09 janvier 2019 08:36
Mahajanga: Voasambotra ilay Frantsay nisintom-bola tamin’ny GAB BMOI tamin’ny karatra tsy ara-dalàna
Voasambotry ny Zandary teto Mahajanga ny 7 janoary 2019 ny lehilahy teratany frantsay iray 32 taona, tompon’antoka tamin’ny fangalarana vola tamin’ny banky BMOI Antananarivo ny 4 janoary 2019 teo.
Fomba fiady tsy dia fahita eto Madagasikara no nampiasain’ity vazaha ity. Manana ireo karazana « carte bancaire » ity farany, izay tsy miasa eto Madagasikara ka ireny no nentiny nampiasaina tamin’ireny GAB (Guichet Automatique de Banque) ireny nisarihana vola.
mercredi, 09 janvier 2019 08:35
Kitra: Hatao any Egypta ny dingan’ny famaranana ny CAN 2019
Taorian’ny nanesorana tamin’i Cameroun ny fampiantranoana ny dingan’ny famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, hatao ny (15 jona - 13 jolay), noho ny fahataran’ny asa fanamboarana ireo kianja handraisana ny lalao, dia fantatra omaly fa hatao any Egypta ny lalao.
Naneho fahavononana hampiantrano io lalao io koa i Afrika Atsimo fa i Egypta no tapaky ny komity mpanatanteraky ny Kaonfederasiona afrikana amin’ny baolina kitra (CAF).
Sambany amin’ity andiany faha-32 hatao any Egypta ity no ho 24 ireo ekipam-pirenena tonga amin’ny dingan’ny famaranana ny CAN. Sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra ihany koa i Madagasikara no tafita handray anjara amin’izany.